QAYBTA 1: Waa maxay Apple Music?
QAYBTA 2: Waxa aan la Music Apple samayn karaa?
QAYBTA 3: Sida loo helo oo wuxuu ku raaxaysan maxkamad Apple music?
QAYBTA 4: Download geeyo music free la TunesGo
Apple Music waa app a music geeyo oo isku geeyo salaysan Times la xarunta loo maqli karo ee songs in mar hore ayaa laga heli karaa maktabadaha Lugood ah. Helitaanka app this asal ahaan ka dhigan tahay in kuwii ku caashaqi jiray music ma u baahan tahay si aad u iibsato albums oo dhan ka Lugood in ay dhagaystaan ​​jecel kuwan raadkaygay tan ugu qiimaha yar, lacagta aan xad lahayn oo muusiko ah la huleeshay karaa in qalabka ay. Maxaa ka dhigay Apple Music gaar ah waa xaqiiqda ah in uu ku keenaa in aad ururinta kala duwan oo ka mid ah heesaha iyo raad ee ka socda caalamka iyada oo channels daahfurka music in ka mid ah wareega raadiyaha saacad Beats 1.
Kuwa hubin adeeg ama $ 9.99 halkii lacag bil oo u baahan in la siiyo si ay u isticmaalaan waxa ay ka dhigi karaan isticmaalka 90 maalin tijaabo free ikhtiyaarka. Tani waxay hubaal ka yimaado sida la yaab leh ka Apple sida ay kuu ogolaanaysaa inaad tijaabinayo app, fahmaan xilkooda iyo aad u ogaato haddii aad rabto lahaa in uu lacag badan ku yaal markii maxkamadda free dhacayo. Ka sokow $ 9.99 halkii lacag bil, waxa kale oo aad u howl galino xirmo qoyska oo kharash $14.99 iyo siinaysaa in ay helaan lix qof ah. Qorshaha qoyska ayaa run ahaantii u muuqataa sida qiimaha qorshaha lacag iyo waa wax barnaamijyadooda kale music sida ma bixiyaan.
Tayada sanqadha ay bixiyaan app waa mid ka mid ah meelaha ay u tartamaya app this tan iyo markii ay durdurro Gurtida at 265 kbps qaab MP3 aad halka adeegyada kale ee ay bixiyaan xitaa A.villa 1441 kbps ama music tayada CD. Xitaa adeegyada sida Spotify bixiyaan 320 kbps hoorto in OGG. Bal aan rajaynayaa Apple warqaba this was jajabkii ka fiican halkii labaad ee dhammaan music caashaqi jiray na. Waxa ugu wanaagsan si kastaba ha ahaatee waa in maktabadda music Apple ayaa 30 milyan oo kuwan raadkaygay iyo sii kordheysay. Tani waa tirada ugu par la tareenka in Google music iyo Spotify leeyihiin oo halkan tartanka u muuqataa dhagan.
Music sidoo kale la uploaded karaa in iCloud u leedahay is-dhexgalka ah aan xuduud lahayn gabayo kale laakiin tani waxay ku eg tahay 25000 heeso sida hadda. Laakiin filayo waa in marka macruufka 9 uu bilaabay, tirada waxaa loo kordhin doonaa in 100000. Bal aan wax yar ka sii na soo gaarin. Apple music app waxay bixisaa qaar ka mid ah sifooyinka wanaagsan sida abuuridda iyo qaybsiga playlists, in ay saldhigyada raadiyaha ka aduunka oo dhan, dhagaysto kuwan raadkaygay ka mid ah playlists aan u dhimeysa amarka ka mid ah playlist iyo kuwo kale oo badan. Macluumaadka soo socda la siiyey waan dumin doonaa iftiin badan ee la mid ah.
Waxba ma ahan meesha aad music ka yimaadaa-ka CD-dejinta ah, gatay Lugood ama soo bixi blog music ah, waxaad ku qaadan kartaa oo dhan hal meel, in Apple Music app mahad. Haddii aad xubin app music Apple noqon, markaas waxaad ku dari kartaa wax maktabadda music Apple aad ururinta. Tani waa bilow ah, waxaa ka; waxaad samayn kartaa playlists, listen to kuwan raadkaygay offline iyo xitaa isku xiro iyo la wadaagaan playlists aad ku shabakadaha bulshada. Maktabadda music tufaax waa weyn oo ka mid ah wax xooggiisii ​​songs helo ama music adkaan doonto, laakiin u maleynayaa in waxa, ma aha. Engine ayaa raadinta ay bixiyaan app waa caqli iyo waxay keentaa in aad natiijada ka soo noqday meeshii aad ka filan. Waxa kale oo aad ka arki kartaa waxa ay baaritaan yihiin trending iyo dhirta dhex music in aad sugayay ka hor.
Mid ka mid ah wax gaar ah oo ku saabsan Apple music app waa in aad sidoo kale noqon kartaa Siri in ay qaataan codsiyada music aad. Si fudud Waxaad weydiin kartaa Siri in ay kaa caawiyaan wax kasta oo ku saabsan ama app.
Bal aynu eegno waxa kale ee aad samayn kartaa music app Apple ah:
Baro music-mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aad samayn kartaa app music Apple waa in aad aragto karaa music. Apple ayaa helitaan qalbiga app iyo aad u saamaxaaya in ay aad u hesho talooyin khabiir marka aad u sheego waxa qaybaha aad jeceshahay ama waxa guutooyinkiisa oo aad soo.
Samee playlists-kale wax xiiso u leh in aad la qaban karto app waa in aad abuuri karaan playlists iyo in sidoo kale si aad u fudud. Iyada oo playlists, awoodo group wada heeso ay lahaayeen niyada gaar ah, fanaaniin ah oo gaar ah ama Qoondayntani kasta oo kale oo aad u. Abuuritaanka playlists waa halkii fudud on app iyo Doorashadan ayaa sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku siin horyaalka, sharaxaad iyo image si playlist ah la abuuro.
Share music iyo playlists-kale wax cajiib ah in aad la qaban karto ama app music waa in aad si fudud u wadaagi karaan music aad sida iyo sidoo kale playlists aad abuuro saaxiibadaa. Si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in la ogaado in la wadaago playlists waa xadidan ilaa xad iyo laga yaabaa in aadan awoodin in ay leeyihiin qaybsiga doorasho aan xuduud lahayn.
Dhegayso music offline-dhex app music cajiib ah, waxa kale oo aad ka heli fursad u raaxaysan music xitaa marka aadan online ah ama ku xiran internetka. Waxaad dhegaysan kartaa music offline. Tan waxaa la samayn karaa, oo ay ku heeso aad rabtid in aad maqli offline in qaybta music offline on app. Waxa kale oo aad ka arki kartaa, edit iyo tirtirto heesaha oo ka mid ah liiska ay dib ka on.
Maxkamad-aad Free siin karaan adeegan orod tijaabo ah oo ku saabsan 90-ka maalmood ah ee gabi ahaanba bilaash ah kharashka. Tani waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee app iyo aad u saamaxaaya in ay siin kubad ka hor bixinta waxaa la isticmaalayo.
Xubin-ka xubin ka bil kasta oo muusiko ah Apple aad kharash $ 9.99, halka haddii aad doorato qorshe qoys, markaas waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lacag dhan $14.99. Qorshaha qoyska waa runtii qiimaha qorshaha lacag kaas oo u ogolaanaya inay helaan of music isla A.villa 6 qof oo waqti isku mid ah.
Beats 1-Kuwa jecel Dhagayso raadiyaha caalamiga ah iyo kuwan raadkaygay ka fanaaniin caan ah oo dunida ku baahsan, Apple Music app waa fursad fiican tan iyo markii ay ku keenaa aad Beats1 taas oo ah helitaanka channel music shaqeeya gudbo iyo isku muuqaalada bulshada si ay u Apple music. Taas macnaheedu waa in aad kala socon kartaa iyo jeclaan fanaaniinta aad jeceshahay ku dhufto ee bulshada.
Balaaran song maktabadda-leh in ka badan 30 milyan oo kuwan raadkaygay uu ka soo xusho, music Apple waa adeeg geeyo music ballaaran oo u suurta galinaya in aad ku raaxaysan aad jeceshahay music iyo fanaaniin ka gees kasta oo adduunka ah.
Curation Curation- waa mid ka mid ah qaababka taas Apple waxaa gelinaya badan oo xoogga la. Music Apple waxay bixisaa ilaa talooyinka in ay yihiin kartoo sida aad u dhadhan. Curation Tani ma aha auto ahbaa oo waa halkii isugu wada dad dhab ah oo khubaro ah music yihiin. Waxaad ka heli kartaa qaybta 'Waayo, waxaad', laakiin waa in aad u qotomiyey by socda Dardar gaar ah in ay doortaan fanaaniinta, qaybaha oo aad jeceshahay guutooyinkiisa oo.
Connect-Connect waa muujinta kale oo music app Apple iyo wax yaabahan ah shabakadaha bulshada artist ku salaysan oo u saamaxayaa taageerayaasha inay raacaan fanaaniinta ay jecel yihiin. Feature Tani waxay kuu ogolaanaysaa wadaagaan content gaar ah taageerayaashooda. Waxaad ka heli kartaa Connect profiles farshaxan badan oo ay ka mid yihiin Pharrell Williams, Chris Cornell, Alabama ruxruxaa, Pearl Jam, FKA saqaf iyo kuwo kale oo badan Apple kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah u raacaan fanaaniinta marka aad ku dari gabayadii fanaaniinta kuwa maktabadda music aad.
Sidii hore u soo sheegnay, mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Apple music app waa fursad u isticmaalaan tijaabo lacag la'aan ah muddo waqti 90 maalin. Taas macnaheedu waa in aad isku daydo kartaa, waayo-aragnimo iyo qabsado app music muddo 3 bilood ah oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha ka hor bixinta lacagta ka dib. Waqtiga gudihiisa, waxaad go'aansan kartaa haddii aad ka heli wanaagga App ku filan si ay ugu bixiyaan. Xidhid maxkamad free saddex Bishan marin buuxa u hesho oo dhan muuqaalada app ku saabsan iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ama PC ku siinayaa. Haddii aad tahay fal Solo ah ama qayb ka mid ah koox gaar ah, waxaa jira xubin ka ah qof walba oo music Apple. Sidan ayaad ka heli kartaa oo wuxuu ku raaxaysan doonaa jirrabaadda kuwa bilaashka ah Apple music app:
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad cusboonaysiiso software si ay u helaan music Apple. Haddii aad tahay user qalab mobile, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso si macruufka version 8.4.
Hadda fur app goobaha dooro Guud. Hadda dooro download iyo rakibi. Oo taas dabadeedna waxaad u baahan doontaa inaad ku heshiiyaan in ay shuruudaha Apple iyo xaaladaha iyo habka download bilaabi doonaa.
Guuleysatey qalab aad iyo dooro Music icon cusub.
Dooro ikhtiyaarka ah 'bilowga 3-bil tijaabo lacag la'aan ah'.
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan qorshaha waxaad u baahan doontaa in la isticmaalo mar waqti tijaabo ay ka badan tahay. Waxaad ku qortaa erayga sirta ah Lugood oo wuxuu ku raaxaysan helaan aan xad lahayn si music for lacag la'aan ah muddo 3 bilood ah.
Oo sidaas waa inaad la tallaabooyinka kor ku siiyo si fudud ku raaxaysan karaan version maxkamad of Music Apple ee App ah.
> Resource > Music > Apple Music adeegyada aad u baahan inaad ogaatid